Ny kisary 2.0 ho an'ny Mac dia havaozina amin'ny vaovao sy ny mifanentana amin'ny Mac M1 | Avy amin'ny mac aho
Raha mitady fangatahana handaminana ny asanao ianao ary maninona, ny fiainanao, dia azo atao amin'ny alàlan'ny tabilao mikoriana. Tsotra nefa miasa. Iray amin'ireo programa izay afaka manampy anao indrindra amin'ny Mac anao ny diagram. Ankehitriny tsy maintsy tadidinao ihany koa fa nohavaozina izy io Kisary 2.0, Azontsika atao ny milaza fa io no fanavaozana lehibe voalohany hatramin'ny nanombohany, ary ankoatry ny fitondrana vaovao dia mifanaraka amin'ny M1 izy.
Nohavaozina tsikelikely ny rindranasa ho an'ny Mac mba hifanaraka tanteraka amin'ilay chip Apple vaovao. Raha dinihina ny maha-M1 Mac manaitra azy ireo dia tsy maintsy ataon'ny mpamorona antoka fa haingana sy azo antoka ny fanavaozana. Ny mpamorona ny kisary dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe an'ity angon-drakitra ity ary namoaka fanavaozana lehibe ny fampiharana izay misy ny mifanentana tanteraka amin'ny Mac miaraka amin'ny M1.
Diagrams 2.0, mamela ny mpampiasa izao mifehy tanteraka ny paleta ao amin'ny antontan-taratasinao. Na dia tsy misy afa-tsy paleta efa voatendry fotsiny ny kinova voalohany an'ny Diagrams, dia misy preset maro kokoa sy fanamboarana palette bebe kokoa ny kinova vaovao. Noho izany, azonao atao izao ny mamorona palety manokana misy singa samihafa isaky ny antontan-taratasy. Hanontany ny programa raha te hampiasa palette preset ianao na mamorona vaovao.
mpandraharaha namaly ireo fiasa tena angatahina amin'ny alàlan'ny fampidirana safidy fomba vaovao hamenoana ny fanaingoana ny paleta. Anisan'izany ny fanitarana ny dobo miloko misy singa sy fampidirana ny fanohanana ny fandefasana lahatsoratra. Ny fanavaozana dia miaraka amin'ny famolavolana lahatsoratra sy safidy loko ary fanatsarana ankapobeny ny interface interface.
Ny tena zava-dehibe, ny Diagrams 2.0 dia mifanaraka tanteraka amin'ny sehatra Apple Silicon ihany koa, midika izany fa mihazakazaka amin'ny Mac M1 ny fampiharana miaraka amin'ny fanatsarana ny fahombiazany sy ny fahombiazany. Azo jerena ao amin'ny Mac App Store ny kisary amin'ny € 24.99 amin'ny fividianana tokana. Ireo mpampiasa izay manana ny kinova fampiharana teo aloha dia hahazo maimaim-poana ny fanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Ny kisary 2.0 ho an'ny Mac dia havaozina amin'ny vaovao sy ny mifanentana amin'ny Mac M1
Office 2021 dia ho tonga amin'ny macOS alohan'ny faran'ny taona
Ny 13 "MacBook Pro miaraka amin'ny M1 dia nivadika ho milina fanovana sary mety indrindra